Firafitry ny firafitra: sarimihetsika biby mangarahara, hydrogel, harato elastika, sarimihetsika perla.
Patch of eye hidrily HYALURONIC & COLLAGEN izay manome hamandoana be dia be amin'ny hoditra marefo manodidina ny masonao. Mamirapiratra ary manondraka avy hatrany. Ny faribolana mainty eo ambanin'ny maso dia lasa tsy dia tsikaritra loatra
HYALURONIC ACID - Manome hydration multidimensional amin'ny fisarihana sy fitazonana hatramin'ny 1000 heny ny lanjan'ny rano
COLLAGEN - manampy milamina sy manalefaka ny fijery ny tsipika tsara. Mampihena ny fisehoan'ny tsipika tsara, ketrona ary tongotry ny goaika. Mamerina amin'ny laoniny amin'ny fomba mahomby ny famirapiratan'ny hoditra, ny fahalemeny ary ny elitika
TYPE hoditra: ara-dalàna, menaka, fitambarana, maina, saro-pady. TSY MISY TSY MISY - Solifara, Parabens, Menaka Mineraly, Silicone, Petrolatum, Phthalate
Ity patch ity no fandefasana entana lehibe indrindra amin'ireo patch hydrogel eto amintsika, ary ilay iray mahomby indrindra.
Ny hevi-dehibe amin'ny famolavolana ity vokatra ity dia ny fametahana «moisturizer» ny kentrona amin'ny maso hampihenana ny fahaverezan'ny rano amin'ny hoditra manodidina ny maso, ampiarahina amin'ny patch hydrogel, mba hahatratrarana ny vokatra mahamando sy anti-ketrona. Voalohany, mila mampiditra moisturizer molekiola kely amin'ny kentrona amin'ny maso isika, ary avy eo apetraka ao amin'ilay faritra mila fikojakojana ny patch hydrogel antsika. Na dia afaka mampihena ny fahaverezan'ny rano aza ny hoditra noho ny fampiharana ny moisturizer dia mbola mila tontolo mando hamandoana ny hoditra izy io. Io fitambarana io dia mety hisy vokany tsara kokoa noho ny moisturizers mahazatra.
Ity vokatra ity dia raisin'ireo mpanjifa tsara, miaraka amina an-tapitrisany maro. Noho ny fifehezana kalitao tsara dia tsy nisy ny fanehoan-kevitra mahazaka.
Teo aloha: Hydrogel microcrystalline nasolabial fonosana patch
Manaraka: kofehin-tsina manandratra tarehy hydrogel sofina mihantona manandratra firming v saron-tava tarehy
Saron-tava amin'ny masony
Patch ny zazavavy
Patch of Hydrogel